Home Wararka Villa Somalia oo abaabuleysi mooshin xilka looga qaadayo Saciid Deni
[Xog] Villa Somalia oo abaabuleysi mooshin xilka looga qaadayo Saciid Deni
Tan iyo markii aay bilaabatay guuxa in Saciid Cabdullaahi Deni uu yahay Musharax u taagan Doorashada Madaxweynaha 2021, ayaa waxaa Villa Somalia aay bilowday abaabul mooshin xilka looga qaadayo Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Villa Somalia aya sidoo kale abaabuleysa Oday dhaqameedyada qaar kuwaasoo bilaabay in aay idaacadaha iyo baraha bulshada ku eedeeyaan Deni in uu rabo in uu boobo xildhibaanada labada aqal ee ka soo galaya degaanada Puntland.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo Guddoomiyaha Baarlabaanka Puntland ayaa wada mooshinka waxaana dhaqaalaha bixinaya Villa Somalia sida MOL aay ogaatay.
Waxaa dhawaan la filayaa in qaar ka mid ah oday dhaqameedyada Puntland ay magaalada Garoowe ku qabtaan shir jaraa’id kaasoo aay ku sheegi doonaan in Deni uu caddeeyo mowqifkiisa in uu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha JFS, haddii aay taasi caddaatana aay u sheegi doonaan in uu faraha kala baxo xulista Xildhibaanada labada Aqal.
Kala soco Muqdisho Online wixii soo kordha.